निमित्त नायक जस्तै !
आफ्ना लागि प्रिय लागेका मान्छेका नामहरू साचेर राखेको खुत्रुके जयमायाको हातबाट खस्छ र अन्धकारतर्फको बाटो हुँदै जयमाया एक्लै लेखापानी आइपुग्छे । मञ्चको प्रकाश निभ्छ ।
मम्मीको अन्तिम सास
स्थान : एम्स अस्पताल नयाँ दिल्ली, अन्सारी नगर एकाध शब्द बोल्न पनि मम्मीलाई कति गाह्रो भइरहेको थियो । भर्खरै बोली फुटेको बच्चा जसरी उहाँ सकी नसकी बोल्नुहुन्थ्यो र, केही पूरै वाक्य पनि पूरा हुन नपाउँदै रोकिनुहुन्थ्यो ।
कुनै दिन मैले पनि भनेकै थिएँ–रगत त सबको रातै हुन्छ ।
सिरानघरे माइला आउने रे, सुन्यौ नानी ?’ एक मन थोरै हाँस्दै र एक मन धेरै रुँदै नूरमाया घर्तीले भनी । थोरै हाँस्दै किनभने सिरानघरे माइला उसका छोराको कमान्डर थियो, उसका आँखाको नानीजस्तो ।
रंगमञ्च कतातिर ?
योसाता पोखरा नगरी नाटकमय बन्यो । गैर्‍हापाटनस्थित गन्धर्व नाटक घरमा झन्डै एक दर्जन नाटक प्रस्तुत भए । फिल्म र रंगमञ्च अनि यसले लिनुपर्ने आगामी दिशाजस्ता सन्दर्भमा गरमागरम बहस भए ।
‘को पढेको, को अपठित ?’
ज्ञानमणि नेपाल (८५) पूर्वीय इतिहास, संस्कृति, राजनीति, धर्म र परम्पराका विशिष्ट ज्ञाता हुन् । औपचारिक प्रमाणपत्रको शिक्षाभन्दा स्वाध्ययनबाट माथिल्लो प्राज्ञिक छवि बनाएका नेपालका ‘नेपाल निरुक्त’ (२०४०), ‘नेपालको महाभारत’ (२०५०), ‘नेपाल निरुपण’ (२०५५) जस्ता कृति अहिले अप्राप्य छन् ।
भौगोलिक रूपमा बंगलादेश नेपालभन्दा ३ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर सानो छ । जनसंख्याचाहिँ नेपालभन्दा करिब पाँच गुणा बढी । सन् २०१६ को जनगणनालाई आधार मान्दा बंगलादेशको जनसंख्या करिब १७ करोडभन्दा माथि उक्लिने सुरसारमा छ ।
त्यो खुसी–खुसी गाउँ
भदौको महिना छ । चुनावको रौनक छ । सर्लाहीको शंकरपुर गाउँमा छु म । झुलेका धानका बोटहरूभित्रै लुक्न आएको थियो घाम, रातै आभामा । त्यही प्रकाशले सुन्तले थियो उनको अनुहार । आँगनकै आँपको गाछीमा बसेर सुनाउँदै थिइन्— कहर जितेर बनाएको रहरको जिन्दगीको कथा ।
स्मृतिमा मेरा बुबा
झन्डै ६६ वर्षअघि पहिलो पटक नेपाल आउँदा मेरो उमेर ५ वर्षको मात्रै थियो । बुबा टोनी हागनका अघिपछि गर्ने, उहाँले बोक्ने ठूलो क्यामरा छुने वा कहिलेकाहीं काँधमा बोकाइमाग्ने दिनचर्या मेरो रहन्थ्यो ।
‘राजनीतिको पछिल्लो पुस्ता अध्ययनबाट टाढा छ’
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीका रूपमा नयाँ अनुहार हुन्­– शेरबहादुर तामाङ । सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद तामाङले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
सहिद गेटबाट त्रिपुरेश्वरतर्फ हुइँकिँदै थिएँ, आर्मी मुख्यालयबाट अलि अगाडि बढेपछि पहेंलो ज्याकेट र हेल्मेट लगाएका एक व्यक्तिले खतराको सूचक पहेंलो झन्डा हल्लाएर सवारी साधन अर्कोतर्फ मोड्न संकेत दिइरहेका थिए ।
गाजलजस्तै, दाग लागिहाल्ने
कतै यस्तो पढियो, यारलाई यारको इसारा याद रहन्छहरेक यारलाई उसको यार याद रहन्छसाँचो यारसँग बिताएका ती पलहरू मुत्युसम्म याद रहन्छ ।
धेरै नै भयो कि ?
अष्ट्रेलियालाई छाडेर अरू देशमा यस्तो विरलै हुँदो हो । खेलकुदको विषयलाई लिएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री म्याकलम टर्नबलले यसै साता बिहान बिहानै देशको नाममा सम्बोधन गरे ।
‘शिवानीलाई आरक्षण चाहिंदैन’
मोडलिङ र भिजेइङबाट चिनिएकी शिवानी सिंह थारू पछिल्लो समय लेखनमा सक्रिय छिन् । उनले बीबीसी नेपाली सेवाका लागि नाटक लेखिन् । यसपालि शिवानी उपन्यास लिएर आएकी छन् ।